Dawladda Kenya oo deeq siinaysa dadka sameeya sofweerka - Sabahionline.com
Dawladda Kenya oo deeq siinaysa dadka sameeya sofweerka
Maajo 10, 2012
Golaha Kenya ee Tiknoolajiyada Macluumaadka iyo Isgaarsiinta (ICT) ayaa guddoonsiiyay 4 milyan oo shilinka Keyna ah ($48,000) 21 shirkadood oo maxalli ah oo ka shaqeeya horumarinta barnaamijyada ay ku shaqeeyaan kombiyuutarrada si ay u sameeyaan barnaamijyo loo isticmaali karo arrimaha bulshada, sidaana waxaa Arbacadii (9-ka May) qoray wargayska Business Daily Afrika.
2,300 oo dhallinyaro ah oo ka faa'idaysnaya mashruuc shaqaaleeyn oo laga fulinayo Kenya
Magaalada Konza oo tijaabinaysa awoodda Kenya ee soo saaridda xirfadlayaal farsamo
Kenya oo taaba-galinaysa casriyayn lagu sameeyo kaabayaasha gaadiidka dadwaynaha
Deeqaha ayaa loo isticmaali doonaa in lagu sameeyo barnaamijyo lagu shaqeeyo sida la socoshada bukaanka qaata dawooyinka, helidda meelaha ay ku yaallaan makhaayadaha iyo agabyada kale ee nolasha fududeeya. Dawladda ayaa qorshaynaysa in ka faa’idaysato barnaamijyadaas oo ay qaarkood la fal-galiso barnaamijka loo yaqaan egovernment.
“Waxaannu u baahan nahay barnaamijyo ay dadka Kenya danahooda ku fududeeysan karaan, annagana naga caawin kara in aan ku dar-dargalin karo wax-qabadkeenna gudaha. Haddaanu sidaa yeello, waxaan dhaqaalaha u badbaadin doonnaa balaayiin shilin,” ayuu yiri Xohayaha Joogtada ah ee Isgaarsiinta Bitange Ndemo mar uu ka halyay xafaladdii deeq-guddoonsiinta oo ka dhacday Nairobi.
“Hadafkayagu maaha kaliya in aan kor u qaadno ganacisga ICT-ga maxalliga ah ee jira laakiin waa in aan caawino kuwa hadda biloowga ah, sida kuwaa maanta la siiyay deeqda,” ayuu yiri Madaxa Guddiga Sare ee ICT, Paul Kukubo.